U-Eskom: Ngesindlebende kwabo nesiyihlongayo – Bayede News
Ngesikhathi uHulumeni wakuleli eqhubeka nokwenza imizamo
Ngesikhathi uHulumeni wakuleli eqhubeka nokwenza imizamo yokukhipha izwe otakwini, enye yezinkampani ezinkulukazi neseyaphila ngesibonelelo sikaHulumeni nezikweletu zakwamanye amazwe isiphinde yaphilisa abakuleli lubhojozi. Bekuyizolo lokhu ibolekwa izigidigidi ezi-R1.5 yinkampani yaseFrance i-Agence Française de Développement (AFD).
Le mali eyabe iyingxenye yesivumelwano sokubolekwa u-Eskom izigidigidi eziyisi-R6.5 esenziwa ngonyaka odlule. Ngokusho kweziphathimandla zakwa-Eskom ingxenye yale mali yabe izosetshenziselwa ukulungisa ingqalasizinda enye ikhokhele uhlelo iJuno Gromis Project eyingxenye yengqalasizinda eseNamaqualand ukuze ugesi ufi nyelele kuzona zonke izindawo esifundazweni iNorthern Cape. Khona lapho uHulumeni osewaphenduka insengwakazi naye uyinika izigidi le nkampani. Phezu kwakho konke lokhu nangaphezu kwesethembiso izikhulu zale nkampani ezisenze ePhalamende ukuthi ugesi ngeke unqamuke, izolo kuculwe elinye iculo njengoba uqalile ukucima izikhawu.
Ngasekuqaleni konyaka uNgqongqoshe Wezinkampani Ezingaphansi kukaHulumeni, uMnu uPravin Gordhan, wethula inhloso yokuwuqeda nya ucimicimi. Wathi uma u-Eskom wehluleka ukuvimba ucimicimi,
okungenani iyoqinisekisa ukuthi uphelela kuStage 1. Ngesikhathi enza lesi simemezelo wathi bathembele eziteshini zezinga eliphezulu eziphehla ugesi, kubalwa neKoeberg ephehla ugesi wenuzi.
Ukubuya kukacimicimi kube nomthelela omubi ezweni. Kuphazamiseke abafundi abebebhala izifundo zobuchwepheshe kumatric okuzodingeka baphinde babhale. Enye yezingozi zikacimicimi wukuthi kuneziguli ezisuke ziphefumula ngemishini. Uma iziphathimandla zingazi ukuthi kuzoba khona ukuhamba kukagesi azikwazi ukulungiselela ukuthi kusebenze amagenerator.
Ngenxa yokucima kukagesi, amabhizinisi nezimboni zizithole kufanele zivale amasango. Lokhu kusho ukulahlekelwa yinzuzo okungagcina kunciphisa amathuba omsebenzi.
IMeya yaseJohannesburg, uMnu uHerman Mashaba uwotha ubovu ngalokhu. Uthe u-Eskom usiphindile “ngokusihlalisa ebumnyameni” njengoba bebengazi ukuthi u-Eskom uzoqala uhlelo lukacimicimi. “Ngethuke ngoma uma ngithola namhlanje ekuseni ukuthi u-Eskom usuqale uStage 2.”
UMashaba uqhube wathi ukucisha kukagesi kwakamuva sekuphinde kwashiya iGoli lisebumnyameni. Asizange sexwayiswe futhi akuzange kuxoxiswane ngokuthi kungase kwenzeke lokhu. Njengesizinda somnotho ezweni kubalulekile ukuthi sikwazi ukuxhumana nabahlali nabamabhizinisi. Ukubaxwayisa kubanika ithuba lokuxhoza omunye umphini.”
UMashaba uthe lokhu okusanda kwenzeka kukhombisa ngokusobala isidingo sokuthi idolobha lizakhele olwalo uhlelo lokuphehla ugesi ukuze linganciki kakhulu ku-Eskom osekhombise ukungathembakali.
UMkhandlu waseJohannesburg usuthembise ukuya enkantolo ukuphoqa u-Eskom ukuthi iqhubeke nesivumelwano sokuthi lo Mkhandlu udonse ugesi esiteshini saseKelvin. Usonga ngalokhu nje ngoba u-Eskom usuhoshe imfe kulesi sivumelwano. Kwakuvunyelwene ukuthi lo Mkhandlu ungathembela kulesi siteshi noma yinini lapho u-Eskom ungakwazi ukuhlinzeka ngogesi.